Fizahan-tany mifantina: Costa Rica hamela ny fizahan-tany avy amin'ny fanjakana enina ihany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Fizahan-tany mifantina: Costa Rica hamela ny fizahan-tany avy amin'ny fanjakana enina ihany
Aogositra 24, 2020
Costa Rica dia nanambara fa ny mponina amin'ny fanjakana enina amerikana monja dia havela hitsidika ny firenena manomboka amin'ny 1 septambra.
Araka ny fanambarana nataon'ny birao fizahan-tany any Costa Rica, ny Amerikanina monina ao Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ary Vermont ihany no mahazo alàlana handeha any Costa Rica.
"Tao amin'ireo fanjakana enina ireo dia nisy fivoarana mararin'ny tsimokaretina ary kalitao avo lenta ny famantarana ny epidemiolojika," hoy i Gustavo Segura, minisitry ny fizahan-tany any Costa Rica, tao anaty fanambarana iray.
Mba hidirana ao amin'ny firenena, ny Amerikanina mpandeha dia tsy maintsy manolotra fahazoan-dàlana mitondra fiara mitondra fiara izay mampiseho fa mponina ao amin'ny iray amin'ireo fanjakana nekena izy ireo.
Ny mpizahatany miditra any Costa Rica dia takiana ihany koa hameno endrika ara-pahasalamana momba ny epidemiolojika an-tserasera alohan'ny hahatongavany sy ny valiny ratsy atolotry ny a Covid-19 fitsapana natao nandritra ny 48 ora taorian'ny nahatongavanao.
Tamin'ny 19 Aogositra, ny sisintanin'i Costa Rica dia nisokatra ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena avy amin'ny Vondrona eropeana, ny faritra Schengen any Eropa, UK, Canada, Uruguay, Japan, Korea Selatan, Thailand, Singapore, China, ary New Zealand.
Raha ny filazan'ny Masoivohon'i Costa Rica dia tombanana $ 1.7 miliara isan-taona ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenena.
Costa Rica mazàna dia mahita mpitsidika maherin'ny 1.7 tapitrisa isan-taona - ny ankamaroan'izy ireo dia mandray anjara amin'ny hetsika ecotourism, na fitsangatsanganana sy traikefa mifototra amin'ny fitehirizana ireo faritra voajanahary voaaro ao amin'ny firenena, ao anatin'izany ireo ala mando, volkano ary morontsiraka.
Ity firenena ity dia iray amin'ny toeran-kaleha maro izay nanomboka niarahaba ireo mpitsangatsangana iraisampirenena tato anatin'ny volana vitsivitsy. Nanomboka tamin'ny volana Jona, ireo mpitsangatsangana avy any Etazonia dia noraisina an-tsokosoko niverina tany amin'ny toerana fialan-tsasatra Karaiba maro, toy ny St. Lucia, Jamaica, US Virgin Islands, St. Barts, ary Antigua sy Barbuda.
'Season Stretch': nambara ny fanitarana ny dia amin'ny fahavaratra ka hatramin'ny fararano
LOT Polish Airlines dia mandefa sidina Wroclaw avy amin'ny seranam-piaramanidina Budapest